August 2017 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Subaa’ee Henook jedhamuun kan beekamu sun Kadhannaa torbii Henook safartuudhaan lakkaawee waan ta’eefi dha. Safartuun isaas lakkoofsa baay’ataa 35 yoo ta’u, 35×19 bu’aa isaatiin yoo baay’atu waggaa 665 ni ta’a. 665 x12 yommuu baay’isnu, 7980 ta’a. Yaadni kunis kan nu hubachiisu waa’ee dhufaatii Kiristoosiidha.
Raajichi Daawiit mootota Isra’eel keessaa mootii guddaa fi jaallatamaa ture. Barri mootummaa isaas Dhaloota Kiristoos Dura bara 1011-971 akka ture ni amnama. Raajichi Dawiit, akka laphee Waaqayyoo ta’uu isaati raajii dubbateera. Kadhannaa toorbiis lakkaaweera. Kunis lakkaawwii (Subaa’ee) Daawiit jedhamuudhaan beekama. “Waggaan kumni Si fuulduratti akka guyyaa kaleessa darbiteetii” (Faar 89:4) kan jedhus barsiisonni yommuu lakkaawan waggaa 1,140 ni ta’a. Kunis Gooftaa biratti waggaan 1140 akka guyyaa tokko akka ta’etti raajicha Daawwiit dubbateera. Kunis Daawitiif lakkaawwii/ safartuu Kadhannaa torbii ta’uun tajaajileera. 1,140×7=waggaa 7,980 ni ta’a. Addunyaan kun erga uumamtee kaasee waggaa 7,980tti Kiristoos lammaffaa akka dhufu kan agarsiisuu dha.
Tooftaan lakkaawuu isaa waggaadhaan yommuu ta’u, kunis waggoottan toorban akka Iyyaasuutti lakkaawuudhaanii dha. Kadhannaan toorbii kun Sanbata jedhama. Daani’eel Kadhannaa toorbii erga lakkaawee fi raajii erga dubbatee kaasee hanga Kiristoos dhalatutti waggaa 490 ni ta’a. Safartuun (baay’istuun) isaas torba yommuu ta’u, 7×70 yoo baay’isnu 490 ni arganna. Kunis raaj-himeessichi raajii erga dubbatee fi Kadhannaa torbii (subaa’ee) erga lakkaawwatee waggoota 490 booda dhalachuu Kiristoos kan ibsuudha.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-08-15 20:08:252018-10-26 09:21:00Kutaa 2ffaa Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Raajotaa